Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha ya bụ "Magnifico". Nwa akwukwo anyi nke Lorenzo Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọsọ ya na ihe mgbaru ọsọ na-agbasi elu ma ọ bụ naanị ole na ole tụlee Lorenzo Insigne's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
A mụrụ Lorenzo Insigne na 4th ụbọchị June 1991 na Frattamaggiore, Ịtali. Ọ bụ nwa nke abụọ a mụrụ nne ya bụ Patrizia Insigne na nna ya Carmine Insigne.
Na-etolite na Frattamaggiore (dị n'okpuru ebe a) a maara nke ọma maka ịmepụta ọtụtụ gọọmenti football gụnyere Arturo Lupoli na Francesco Lodi, Lorenzo, bụ nwata, nwere mmalite mmalite nke ndụ.
Ndị nne na nna Lorenzo gbalịsiri ike zụlite ya na ụmụnne ya nwoke atọ n'ime ụlọ dị mgbagwoju anya nke na-enweghị ike ịkwado ndụ dị mma maka ezinụlọ dịka Lorenzo. Ọnọdụ dị njọ mgbe Carmine Insigne (papa Lorenzo) mereghachiri na ọrụ, mmepe nke mere ka nne na nna ochie nke Lorenzo nyere aka kwado ihe isi ike nke ịzụlite ụmụ ụmụ ha.
N'agbanyeghị ihe ịma aka ndị ahụ, Lorenzo bụ onye malitere inwe mmasị na football n'oge ọ bụla anaghị akpafu mgbe ọ bụ nwata. Maka Lorenzo, mmasị n'ịgwuri egwu na-eme ihe dị ka nri si azụ ụmụaka, nne mama Lorenzo na-echeta site na ikpughe nke ahụ;
"Dịka nwatakịrị, Lorenzo riri n'etiti Mouthfuls ma jiri bọl na ụkwụ ya n'oge ọ nọ na ya."
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
N'ịchọ ịkwado mgbalị ndị nne na nna ya na ndị nne na nna ya mere, Lorenzo malitere ọrụ n'ọfịs ahịa ebe o rere uwe. N'oge na-adịghị anya, o nyere ego zuru ezu iji zụrụ onwe ya Ronaldo R9 jersey nke obere arụsị nwata, bụ Brazillian Ronaldo.
Ihe ndị si n'aka ndị ahịa ahụ nyekwara aka kwalite ọdịmma ya na klọb ndị ntorobịa bụ nke mbụ bụ Olimpia Sant Arpino ebe Lorenzo nọ na-etinye akụkụ ka mma nke afọ ya.
Mgbe ọ nọ na Olimpia, Lorenzo mere ọtụtụ ihe iji mee ka obere ogo ya pụta dịka ọ na-ejedebeghị arụmọrụ ya site n'inwe ihe mgbaru ọsọ dị oke mma. Mgbalị ya kwụrụ ụgwọ mgbe ndị na-egwu si Napoli leghaara nha ya anya ma kpọga ya na Ahịa Ntorobịa nke Napoli mgbe ọ bụ nanị 15.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Bilie Iji Mara Aha
Ọ bụ na ndị na-eto eto na Napoli na Lorenzo na-aga n'okporo ụzọ a ma ama na ihe mgbaru ọsọ ya maka isi Primavera. Nlekọta egwuregwu football sochirinụ hụrụ Lorenzo nyefe n'ọtụtụ klọb ndị agbata obi ya gụnyere Cavese, Foggia na Pescara ebe o nyeere aka merie isiokwu Serie B ma kwụsị ịkwụsị ya.
Ọganihu ọ na-ahụghị site n'aka ụlọ ọrụ klọb ya mere ka o nwee ebe na egwuregwu mbụ nke ọgbakọ. N'ihi ya, o mere ka ndị mbụ na-eme egwuregwu Serie A na UEFA na 2012 na 2013 na-egosiputa ụdị ọ bụla ọ bụla, ọsọ ọsọ yana isi ihe mgbaru ọsọ na enyemaka ndị na-enyeghị aka na ọganihu Napoli n'ọtụtụ mkpọsa ma chebe ya ka ọ bụrụ mmalite n'ime 2014 World iko maka Italy. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Ndụ mmekọrịta
Lorenzo Insigne na enyi ya nwanyị na-enwe mmekọrịta dị ogologo oge ma ọ bụ Wag tụgharịrị nwunye, Genoveffa Darone onye ọtụtụ kweere na Insigne agaghị aghọ kpakpando na-enweghị mmetụta ya ná ndụ ya.
Di na nwunye ahụ zutere na Naples ka Insigne nọ na-akpọ Pescara, nzukọ nke Insigne ga-echeta mgbe niile site n'ikwu na:
"Malite mgbe m hụrụ ya, amatara m na achọrọ m ịnọnyere ya"
Ịgba egwu maka Pescara hụrụ Insigne na-ebi 250km site na Naples ebe Genoveffa bi. N'ihi ya, Insigne rụrụ ọrụ siri ike site n'ihe mgbaru ọsọ 19 maka Pescara iji hụ na Napoli kpọrọ ya azụ na site na ndọtị, hụ na ọ bi nso Genoveffa.
N'oge na-adịghị anya di na nwunye ahụ lụrụ na 31st nke December 2012. Enwere mmekọrịta ha na ụmụ nwoke abụọ Carmine Insigne (mụrụ 2013) na Christian Insigne (a mụrụ 2015).
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Ihe ndị dị elu
Onye enweghi ike ikwu banyere Insigne n'enweghi ike ikwu okwu banyere ogo ya. Iguzo na 1.63 m (nke dị ugbu a) Ogwe aka dị elu na-aga n'ihu ịchụ nta ya n'ụzọ dị iche site n'otú o si mee ka ọ kwụsị inye nrọ nke ịgba bọlbụ na ọkwa ọkachamara mgbe ọ na-arụ ọrụ.
"N'Ịtali, ndị Scouts na-akwụwa aka ọtọ, ha na-ekwukarị" Anyị hụrụ ya n'anya, ma ọ dị mkpụmkpụ. "Enwetara m oge mgbochi, nhazi atụmatụ nke ịkwụsị ma na-eteta n'ụtụtụ ọ bụla na-atụ anya na m ga-etolite n'abali".
Ọganihu dị ngwa na ịrị elu nke Insigne, aha elu dị elu na-adịghị achọ ịchọta n'ụzọ dị mwute dị ka ọ na-eji eme ihe ma bụrụ ihe mgbakasị egwu dịka o yiri ka ọ na-emekarị ka ọ ghara ịchọta ya mgbe ya na Mascots nọ.
Otu ga-achọ ịsị na Insigne na-enwe ọhụụ n'emeghị ihe ọ bụla mgbe ọ na-ahụ maka ndị otu mba nke Ịtali, Otú ọ dị, otu ihe ahụ mere mgbe ọ na-apụta maka ụlọ egwuregwu.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Nsogbu na-egbu mgbu
Otu ihe dị mwute nke mere ọtụtụ ihe na-egosi na enweghị nchebe na obodo Naples bụ ịbịakarị Insigne na nwunye ya na mberede. Anime na-ebu ụgbọala n'obodo Naples mgbe mmadụ abụọ na-apụnara mmadụ ọgba tum tum wetara n'akụkụ ụgbọ ala ya mgbe ha na-aga n'okporo ụzọ.
Ndị na-apụnara mmadụ ihe na-eyi egbe na Insigne na nwunye ya na-amanye duo ka ha pụọ ​​na nchegharị Rolex, mgbaaka diamond na euro 800 ego. Nke a na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ na ndị ohi ahụ maara onye onye ha na-ahụ maka ya ka ha na-agba ya ume ka ọ gụọ ihe mgbaru ọsọ maka Napoli megide Fiorentina na egwuregwu na-abịanụ.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Ebumnuche kpatara aha njirimara
A na-akpọ aha na Insigne "Lorenzo Il Magnifico " site na ndị edemede na ndị na-ede egwuregwu maka ikike ya iji dozie ihe mgbaru ọsọ ya ma nyere aka n'ịgbanwe ihe egwuregwu mgbagwoju anya maka uru nke otu ya.
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Egwuregwu Football
Enigne toro na-ahụ n'anya Brazillian Football akụkọ, Ronaldo megide Maradona. O gosipụtara ịhụnanya o nwere maka Ronaldo site na ọchịchọ ọ na-enwe maka ihe nkiri egwuregwu Ronaldo karịsịa na akpụkpọ ụkwụ R9s nke bịara na ọlaọcha, na-acha anụnụ anụnụ na odo (dị n'okpuru). N'anya ya maka akụkọ ihe omuma na ihe ojoo dika Ronaldo ndi choro Inter Milan na oge ahu ama mara maka oke obi ya megide Napoli (ulo ndi nopu nke Insigne).
Dị ka Insigne si kwuo;
"Nna m bụ nnukwu onye na-akwado Napoli ma bụrụ onye na-akwado MaradonA, n'ezie, Ronaldo na-egwuri egwu Inter n'oge ahụ, ọ na-etikwa mkpu na Napoli na-ebe ákwá. Ma, m bụ nanị nwa ewu. Amaghị m ihe ọ bụla ka mma, na enwere m mmasị na R9s bua nke papa m zụtara m n'ihi agbanyeghị i kwenyere na ọ ga-eme ka m kpọọ dị ka Ronaldo ".
Otú ọ dị, Insigne aghọwo ogo Maradona ugbu a na ya (Insigne) na-egwu egwu Napoli ma nwee nghọta zuru ezu banyere ihe ọ pụtara igwu egwu n'otu ebe ahụ ebe Maradona na-egwuri egwu.
"Na nkwanye ùgwù ziri ezi maka Ronaldo, ugbu a ka m dịkwuo okenye, amatakwara m akụkọ ihe mere eme, aghaghị m ichegharị ma kwuo na Maradona bụ onye kachasị ukwuu. Mr Ronaldo, ị nwere nnukwu akpụkpọ ụkwụ. Ị bụ onye maara ihe. Ị bụ m n'ike mmụọ nsọ. Ma m bụ onye Neapolitan, ya mere aghaghị m ịsị na e nwere otu eze, aha ya bụ Diego ".
Lorenzo Insigne Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Ọhụụ Eziokwu-Eziokwu nke Onye
Insigne bụ onye ọkpụkpọ kpebiri nke ga-akwụsị ihe ọ bụla iji gosi na ya ruru eru maka ihe ọ chọrọ. Nke a gosiputara na oke ọrụ ya na Pescara bụ nke na - emerighị ya nanị na Napoli ma mee ka ọ bịarukwuo ịhụnanya maka ndụ ya.
N'ikwu nke a, ọ na-amasị ịnọ na Touch na ndị enyi ya, ezinụlọ na onye ọ bụla ọ nwere akụkọ ihe mere eme nke ọma.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Lorenzo Insigne Ụmụaka na akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.